वीरले सुरु गर्‍यो क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा, धुम्रपान छोड्नेका लागि नि:शुल्क परामर्श – Health Post Nepal
वीरले सुरु गर्‍यो क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा, धुम्रपान छोड्नेका लागि नि:शुल्क परामर्श
२०७८ कार्तिक १७ गते १४:०४
वीर अस्पतालले ‘क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा’ सुरु गरेको छ। अस्पतालले छुट्टै बहिरंग सेवा स्थापना गरी ‘क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा’ दिन थालेकाे छ।
पाठेघर मुख, स्तन, लामो आन्द्रा र मलद्वार अंगका क्यान्सर परीक्षण गरिने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सन्ध्या चापागाईंले जानकारी दिइन्। यी फरक खालका क्यान्सरको पहिचानका लागि आइतरबारदेखि शुक्रबारसम्म १० देखि ३ बजे स्क्रिनिङ क्लिनिकमार्फत सेवा दिइनेछ।
स्क्रिनिङ कार्यक्रमले १० वर्षपछि हुनसक्ने क्यान्सर, वंशाणुगत कारणले हुने क्यान्सर, छिटो हुन लागेको क्यान्सरको पत्ता लगाउन सकिने भएकाले रोग लाग्नै नदिने सेवाको उद्देश्य रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. भुपेन्द्र कुमार बस्नेतले जानकारी दिए।
नेपालमा देखिएका प्रमुख क्यान्सरलाई मध्यनजर गर्दै स्क्रिनिङ सेवा सुरु गरिएको डा. बस्नेतको भनाई छ।
‘कुनै पनि अंगमा क्यान्सर हुन लागेको समयमै थाहा भएमा एक त छिटो उपचार हुन्छ अर्को, १० वर्षपछि लाग्न सक्ने क्यान्सर पनि स्क्रिनङले थाहा पाउन सकिन्छ,’ डा. चापागाईंले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य रोग लाग्नै नदिने हो।’
क्यान्सर स्क्रिनिङका लागि अस्पतालले एक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाएको छ। क्लिनिकल अंकोलोजिकल विभागका चिकित्सकले हेर्नेछन्।
अस्पतालले केही समय अगाडि नै क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सुरु गरेको थियो। तर, जनशक्ति अभावमा सेवा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन।
अन्य अंगमा हुने क्यान्सरको स्क्रिनिङ पनि बिस्तारै बढाउँदै लैजाने र सेवाले निरन्तरता पाउने डा. बस्नेतले बताए। नेपालमा अधिकतम फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ भने महिलामा पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सरले पनि धेरै ग्रसित छन्।
क्यान्सर स्क्रिनिङ के हो?
कुनै पनि स्वस्थ मानिसमा रोग लाग्नु अगाडि नै क्यान्सरका लक्षणहरु देखापर्नु सुरुको अवस्थामा पत्ता लगाउने विधिलाई स्क्रिनिङ भनिन्छ।
कस्ता व्यक्तिलाई स्क्रिनिङ गर्ने?
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति अनुसार ३० देखि ६० वर्षका सबै महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गरिन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचानका लागि भिआइए परीक्षण गरिन्छ।
त्यसैगरि, स्तनका लागि ४० वर्षमाथिका महिलाले परीक्षण गर्न उपयोगी हुन्छ। स्तन क्यान्सरको लागि मेमोग्राम गरिन्छ। तर परिवारका सदस्यमा स्तनको क्यान्सर देखिएको छ भने परिवारका अरु सदस्यलाई पनि यसको लक्षण देखिन सक्छ।
परिवारका सदस्यमा ठूलो आन्द्राको क्यान्सर देखिएको छ भने अन्य व्यक्तिलाई पनि यसको लक्षण देखिन सक्छ। जसका लागि दिसा परीक्षण गरिन्छ।
कस्ता व्यक्तिलाई बढी जोखिम?
चिकित्सकका अनुसार लामो समय धुम्रपान प्रयोगकर्ता, प्रदूषणमा बसिरहेका, पेस्टिसाइडजस्ता विषादीको सम्पर्कमा काम गरिरहने किसान, लामो समय रङ्गको काम गर्नेहरू, रङ्गको कारखानामा काम गर्नेहरू, परिवारमा पहिला नै कसैलाई क्यान्सर भएका, विवाहित-अविवाहित महिलालगायतका समूह क्यान्सरको सम्भावित जोखिममा हुन्छन्।
यी समूहसँगै शंका लागेका अंगहरूको परीक्षण गरी क्यान्सरको जोखिमबाट बेलैमा बच्न सकिने डा. चापागाईंले बताइन्। त्यसैगरि, विभिन्न रोगका बिरामीले धुम्रपान छोड्न चाहेमा परामर्श पनि अस्पतालले दिन थालेको छ। परामर्श निःशुल्क हुनेछ।